Myanmar Youth Media Club - Documentaries
It's All About Documentaries!	07May
Amelia Earhart Amelia Earhart က Atlantic သမုဒ္ဓရာကို တစ်ယောက်တည်း ဖြတ်ကူးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး လေယာဉ်မှုး ဖြစ်ပြီး သူမ ဘယ်လို ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ခုထိ အဖြေရှာ မရသေး ပါဘူး။ 259	Continue Reading
The St. Valentine's Day Massacre ၁၉၂၉ ခုနှစ်က Valentine's Day မှာ Chicago မြို့က လူခုနှစ်ယောက်ကို သွေးအေးအေးနဲ့ ရက်ရက်စက်စက်ပစ်သတ် ခဲ့တဲ့ ကြောက်စရာ အဖြစ်အပျက် တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ ပါတယ်။
353	Continue Reading
Anyone Heard Of Britain's First Serial Killer ? Mary Ann Cotton ကို Black Widow လို့သိကြပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသောကွင်းဆက် လူသတ်သမား ဖြစ်ပြီးမိမိ ရင်သွေးကိုတောင် အာဆင်းနစ် အဆိပ်သုံးပြီး သတ်ခဲ့တာပါ။
317	Continue Reading
Biography:Barrack Obama အမေရိကန် သမ္မတ Obama မြန်မာပြည် လာလည်ပြီးချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေ Obama ပေါ်ပိုမို အာရုံစူးစိုက်လာ ကြသလို သူ့အကြောင်းလည်း ပိုသိချင် လာကြတယ်။ ဒီ Documentary လေးက Obama ရဲ့ Biography ပေါ့။
588	Continue Reading
Interview withaCannibal လူသားက ချိုပြီး စားကောင်းတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ တခြားဂြိုလ်က ရောက်လာတယ်လို့ ထင်နေတဲ့ ဂျပန် လူမျိုး Issei Sagawa ကတော့ တကယ်စားကြည့်ပြီး တကယ်ကြိုက်သွား သယောင် ရှိပါတယ်။
2052	Continue Reading
Russia: Land of the Tsars Documentary နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ အတွင်းဖြစ်ပျက် ခဲ့တဲ့ Russia သမိုင်းကိုအတိအကျ အပိုင်းလိုက် ပြန်ဖြည်ထားတဲ့ Documentary ပါ။ ဇာဘုရင်တွေ Russia ရဲ့ဧကရာဇ်တွေ စသဖြင့် သမိုင်းစိတ်ဝင်စား တဲ့သူတွေအတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ Documentary ပါ။
649	Continue Reading
Sexual Cannibalism of The Female Praying Mantis ဒီ Article လေးကိုဖတ်ပြီးတဲ့လူအတော် များများကတော့ငါ့ရဲ့ အရင်မိန်းမနဲ့ အတော့်ကိုတူတာပဲဆိုပြီး မှတ်ချက်ပေးလေ့ ရှိတယ်တဲ့။ ဘာတွေများဒီလောင်တောင် သဘာဝတရားကြီးနဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါလိမ့်။
1336	Continue Reading
Myanmar girl trying to reach for Guinness World Record မြန်မာပြည်မှာ guinness world record ၀င်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ အသက် ၁၆လ သာရှိသေးတဲ့ကောင်မလေး ရှိတယ်ဆိုရင် အံ့ဩမလား? ဒီ Article လေးမှ သက်သေပြပါလိမ့်မယ်။
2269	Continue Reading
23 > >> Categories	Movies & Celebrities
Facebook Google+ Hang Out Updated Screen Sharing Author Administrator	ဒီနေ့မှာတော့ Google+ ရဲ့စွယ်စုံရ Video Chat အနေနဲ့ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ဖြစ်နေတဲ့ Hangouts ကအမြင်ပိုင်းကော အလုပ်လုပ်တဲ့ အပိုင်းမှာကော update လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။	Read more
Google+ Hang Out Updated Screen Sharing
CES2013: Sony's Egg Shaped Bluetooth Speakers Author Administrator	Sony ကဒီနှစ် CES ပွဲမှာ Sony ကတစ်ကယ်ကို ချစ်စရာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်တဲ့ SRS-BTV5 ဆိုပြီး နာမည်တပ်ပေး ထားတဲ့ Bluetooth Speaker လေးတွေကို ပွဲထုတ်လိုက် ပါပြီဗျာ။	Read more
CES2013: Sony's Egg Shaped Bluetooth Speakers
First Look On Google Glasses Author Administrator	Google ကလာတော့မယ့် မျက်မှန်တွေကို လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ထဲက ကောလဟာလတွေ ထွက်နေပေမဲ့ အခုတော့ Google Plus မှာ Project Glass ဆိုပြီး ထွက်လာပါပြီ။	Read more
First Look On Google Glasses
Scandock Author Administrator	ကိုယ့်ရဲ့ smartphone ကနေပြီးတော့ documents တွေကို Scandock ရဲ့အကူအညီနဲ့ scan ဖတ်လို့ ရတော့မှာ ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင် နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။	Read more
Content View Hits : 8589128